कसरि Ransomware द्वारा संक्रमित गर्न को रोकन को लागि? - सिल्टलले जवाफ दिन्छ
फ्रैंक निदान, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छ, कि ransomware एक प्रसिद्ध प्रकारको दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर हो जसले पीडितहरूलाई खतरामा पार्छ र कम्प्युटर यन्त्रहरूमा उनीहरूको पहुँच रोक्न नसक्ने सम्मको छानबिन नगरे सम्म। यस्तो आक्रमणहरू ट्राजान्जको मद्दतमा गरिन्छ जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूका प्रमाणपत्र र वैध वस्तुहरूको विचारमा आफ्ना प्रणालीहरूमा डाउनलोड गर्छन्। हालको महिनाहरूमा, दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयरले विश्वभर ठूलो संख्यामा कम्प्युटर प्रणालीलाई प्रभाव पारेको छ। सफ्टवेयर सिक्योरिटी फर्महरूले दावा गर्छन् कि रानोमोरवेयर कीड़े वान्नाको रूपमा नाम राखेको छ, यसले करिब दुई सय भन्दा बढी देशहरूमा 140,000 भन्दा बढी कम्प्युटर यन्त्रहरू संक्रमित गरेको छ, युक्रेन, ताइवान, र रूसले शीर्ष लक्ष्यको साथ। ब्रिटिश अस्पतालों को एक कम्प्यूटर सिस्टमहरु लाई बंद गर्यो, र टेलीफोन्निया को रूप मा केहि स्पैनिश कम्पनीहरु, साथ नै केहि सरकारी संगठनों र व्यवसायहरु को एक महत्वपूर्ण संख्या मा प्रभावित भएको थियो। कास्पर्सस्की ल्याब र सिम्यान्टेकका विशेषज्ञहरूले दावी गर्छन् कि वन्नाको संस्करणहरूमा पुरानो कोड लाजरस ग्रुप प्रोग्रामहरूमा ठूलो संख्यामा देखा पर्दछ। यी कोडहरू भाइरस छन् र उत्तर कोरियाली उपकरणहरूको ठूलो संख्यामा संक्रमित छन्। WannaCry ले धेरै स्मार्टफोन र कम्प्युटर सिस्टमहरू अहिलेसम्म प्रभावित गरेको छ, कास्पर्सकी लेब विशेषज्ञ, कर्ट बामागार्टनले रायटर्ससँग साक्षात्कारमा भने।
यो कसरि काम गर्दछ?
WannaCry ransomware को एक प्राथमिक रूप हो जुन तपाईंको कम्प्यूटर फाइलहरु को लक गर्न सक्छन्। त्यसपछि त्यसपछि तपाईंको डाटा स्थायी रूपमा एन्क्रिप्ट गर्दछ, र तपाईंले छुट्याउन सम्म आफ्नो उपकरणमा पहुँच गुमाउनु भएको छ। यो ransomware मुख्य रूपले माइक्रोसफ्ट प्रयोगकर्ताहरू र ती व्यक्तिहरू जसले विन्डोज र लिनक्स प्रयोग गर्दैछन्। जब तपाईंको प्रणाली WannaCry बाट प्रभावित हुन्छ, तपाईं एक महत्त्वपूर्ण नम्बरमा पप-अप सन्झ्यालहरू देख्नुहुनेछ। Source .हैकरहरूले यी सञ्झ्यालहरूको लागि छुटकारा तिर्न कसरी निर्देशन दिन्छन्, र छुडौती $ 3000 सम्म प्रति उपकरण हो। यी पप-अपहरूले धेरै काउन्टीडाउन पनि सुविधा दिन्छन्: भुक्तानी दुग्ध गर्नुअघि एक-चारको अन्तिम म्याद देखाउँदछ, अन्यले 30 दिनको समय सीमा देखाउँछ भने अन्यथा तपाईँले सधैंको लागि तपाइँको डेटा हराउनुहुनेछ। हैकरहरूले बिटककोइन र पेपालप मार्फत मात्र भुक्तानी स्वीकार गर्छन्। एक प्रसिद्ध हैकिंग समूह, छाया दलालहरु ले हाल मा यो मैलवेयर जारी गरे र नासा को संवेदनशील सुरक्षा प्रणाली मा हमला गरे।
यो कसरी फैल्यो?
प्रायः, ransomware ले तपाइँको कम्प्युटरलाई संक्रमित फाइलहरू डाउनलोड गरेर वा अज्ञात वा अपरिचित लिङ्कहरू क्लिक गरेर प्रवेश गर्दछ। केहि सुरक्षा विशेषज्ञहरूले दावा गर्छन कि WannaCry जस्तै संक्रमण कीड़े को रूप मा फैलिएको छ; केहि दिन भित्र, उनि आफ्नो कम्प्युटर उपकरण को संक्रमित गर्दछ र यसको सबै संलग्नहरु लाई संक्रमित गर्दछ। यस्ता कार्यक्रमहरूले पनि तपाईंको डेटा इन्क्रिप्ट गर्यो, र ह्याकर्सले तपाइँलाई पहुँच प्राप्त गर्नु अघि माग भुक्तानी भुक्तानी गर्दछ।
यो कहाँ फैलिएको छ?
ताइवान, युक्रेन र रूसका शोधकर्ताहरू आक्रमणकारीहरूका लागि उच्च लक्ष्य भएका छन्, तर धेरै अन्य देशहरूले पनि संक्रामक प्रणालीहरू रिपोर्ट गरे।
जेम्स स्कटको क्रान्तिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजीले भन्यो कि ransomware पहिलो 2016 मा फैलियो, र यसले अस्पतालहरूमा धेरै कम्प्यूटरहरू संक्रमित गर्यो।
संक्रमण को रोकथाम
माइक्रोसफ्टको मालवेयर सुरक्षा केन्द्रले तपाइँले एन्टिभाइर सफ्टवेयरको भर्खरैको संस्करणहरू स्थापना र डाउनलोड गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट गर्दछ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ अज्ञात लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहुन्न र ईमेल अनुलग्नकहरू खोल्न नसक्नु भएका मानिसहरु बाट आएका छन् जुन तपाई थाहा छैन। इन्टरनेट ब्राउज गर्दा मानिसहरूले आफ्नो एंटीवायरस सफ्टवेयरलाई बदल्नुपर्छ, र पप अप बन्द गर्दछ ताकि तिनीहरू सुरक्षित घडीमा रहन्छन्। तपाइँलाई संक्रमणहरू रोक्नको लागि नियमित आधारमा तपाईंका फाइलहरू जगेडा गर्नुपर्छ।